Ogaden News Agency (ONA) – Imaanshihii Meles Koonfur Afrika oo ilaa hada aan saxaafada dalka laga sii dayn
Imaanshihii Meles Koonfur Afrika oo ilaa hada aan saxaafada dalka laga sii dayn
Posted by ONA Admin	/ May 24, 2012
iyo filim laga soo duubay banaabixii shalay.
Waxaa South Africa soo galay dhiigyacan yacabka nacabka ah ee Geeska Africa uu ka degi la’yahay. Wararka aan helayno ayaa waxay shegayaan inuu shalay kulan la qaatay Wasiisrka Gudaha Home Affairs- ka ee South Africa oo haba yaraatee aan laga sii daynin wax ku saabsan arintaa saxaafada gudaha iyo tan caalamiga ah midna, arintaasoo dhaqanka diblomasiyadda xaaraan ka ah, maadaama uu yahay wafti sare oo dal kale yimid. La kulankani ayay dadka qaar ku tilmaameen inuu yahay barnaamij la qarinayo iyadoo la tuhmayo inuu ku saabsan yahay arin quseysa sharciyada dadka Ethiopian-ka ah in laga hor istaago.
Waxaa shalay banaanbax aad u weyn isugu yimid mucaaradka Ethiopia oo dhan sida oy ka mid yihiin jaaliyadaha Oromada oo si xoogan u timid iyo jaaliyada Ogaden community iyo jaaliyadda Amxaarada. Banaabaxaa ayaa lagu horqantay Hotel-weyn oo ku yaala magaalada Johannesburg.
Waxaa goobta banaabaxa durbadiiba la keenay ciidamo si gaar ah u tababaran waxaana aad loo soo xoojiyay amniga ninkan dambiilaha ah oo la ogyahay inuu galay dambiyo ka dhan xuquuqda aadanaha. Sidaasi darteed waxuu meel kasta oo caalamka uu istaago kala kulmaa ceeb iyo waji gabax iyo murugo ka soo gaadha.
Waxaa la qaban-qaabinayaa maalinta Jimcaha bari ah mudaaharaadkii ugu weynaa ee jaaliyadda Somalida Ogadeniya ee Koonfurta Africa ay qabato, waxaana ka soo qayb galaya dhamaan xubna community-yada kala ah Somalida, Oromada, iyo Amxaarada. Sidoo kale shacabka reer Koonfur Afrika een jeclayn adoonsiga iyo cadaalad darada ayaa banaanbaxa la filayaa inay qayb weyn ka qaataan.